सिथिल बनेको कार विक्रीलाई नयाँ मोडलले 'आइस ब्रेक' गर्छ कि: निराकार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
12:49 pm, आइतबार, असोज १८, २०७७
लामो लकडाउन र त्यसपछि भएका निषेधाज्ञा लगायतको मानिसको जनजीवन नै प्रभावित पार्नेगरी भएको कोभिड १९ को असरले समग्र देश नै समस्यामा परेको छ । अहिले हरेक क्षेत्र कोभिडको असरका कारण संकट उन्मुख देखिएको छ । यस्तोमा अटोमोबाइल व्यवसाय सहज र राम्रो हुने कुरै भएन । यद्यपि मानिसले आफ्नो सुरक्षित यात्राको लागि भनेपनि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद बढाएका छन् ।
यस्तोमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको विक्री कस्तो अवस्थामा रहेको छ । ग्राहकका रोजाइमा कस्ता कार पर्ने गरेका छन् । र, गाडी विक्रेता कम्पनीको अबको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हुन्डाई गाडीको आधिकारीक विक्रेता कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले गाडीको माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?
आपूर्तिको पाटो हामीले नै रोकेर राखेका थियौं । यहाँ अवस्था सहज नभइकन गाडी ल्याएर थुपार्नु पर्ने अवस्था थियो । नयाँ वर्षको मुखबाटै लकडाउन भएकाले आयातकर्ता कम्पनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा गाडी थुप्रिएको थियो । चैत ११ गतेपछि भदौ ४ गतेसम्ममा जम्मा ४७ दिन मात्रै शोरुम खोलिएको थियो । त्यसपछि पुनः निषेधाज्ञा जारी भयो । त्यसैले यो अवधिमा हुने विक्रीको करिब १० प्रतिशत मात्रै विक्री भयो ।
अहिलेको अवस्थालाई अनुमान समेत गर्न नसकिने अवस्था छ । हाम्रो हुन्डाईकै कुरा गर्ने हो भने हामीले अबको बजारमा केही सेल्स पाउन नयाँ गाडीको सहारा लिनु पर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तीन नयाँ गाडी बजारमा उतारेका छौं । अउरा, ग्राण्ड आई १० नियोस र नयाँ जेनेरेशनको क्रेटा हामीले ल्यायौं । यसले रोकिएर बसेको हाम्रो ‘सेल्समा आइस ब्रेक’ गरेको छ ।
अहिले शोरुममा देखिएको ग्राहकहरु नयाँ गाडीकै लागि आउनु भएको छ । स्कीम ल्यायौं, अन्य कम्पनीहरुले पनि स्कीम ल्याएका छन् । तर, त्यसले ग्राहक तान्न सकिरहेको छैन । हेरौं दशै नजिक आएसँगै केही विक्री बढ्छ कि ।
कोभिड अगाडि र कोभिड पछाडिको ग्राहक प्यार्टनमा केही परिवर्तन पाउनु भएको छ ?
गाडी किन्ने मानिसहरु नयाँ सेग्मेन्टबाट थपिएको हामीले पाएका छौं । सामाजिक दूरी कायम गर्नकै लागि गाडी किन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । साथै, घरमा एउटा कार भएर पनि परिवारको लागि अर्को कार किन्न आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ ।
हिजोको जस्तो बैंकिङ र इन्स्योरेन्समा काम गर्ने मानिसहरू कारको सबैभन्दा ठूलो क्रेता थिए । आज ती सेक्टरमा काम गर्नेहरूबाट माग घटेको छ । नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनीयर, सीए, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको गाडी किन्ने संख्या बढेको छ ।
रियल स्टेट, म्यानपावर, टुरिजम क्षेत्र र एसएमई व्यवसाय संचालन गर्ने मानिसहरू गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा डिजिटल प्ल्याटफर्मको प्रयोगबाट गाडी किन्नेदेखि नयाँ मोडलहरुको सार्वजनिक गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तोमा कम्पनीहरूको अबको रणनीति के हुन सक्छ ?
नेपालमा अनलाइनबाटै खरिद विक्री गर्ने दिन आइसकेको छैन । त्यसमा पनि गाडी जस्तो कयौं पटक टेस्ट ड्राइभ गरेर किन्ने ग्राहकहरू हुनुहुन्छ । त्यस्तोमा गाडी विक्रेताहरुले ‘कन्ट्याक लेस सेल्स थ्यौरी’मा डिजिटल प्ल्याटर्फमको प्रयोग शुरू गरेका हौं । एउटा गाडी किन्ने मानिस ५ वा ६ पटक शोरुममा आउने गर्थे भने त्यसलाई घटाएर १ वा २ मा झार्न कम्पनीहरूले यस्ता प्ल्याटर्फमको शुुरुवात गरेका हुन् । त्यसले कोभिडको जोखिमलाई पनि कम गराएको छ ।
हाम्रो डिजिटल प्ल्याटर्फमबाट गाडी किन्न चाहने ग्राहकले बुकिङ गर्ने, टेष्ट ड्राइभ बुक गर्ने, थप जानकारी लिने, इएमआई क्लकुलेसन गर्ने, कोटेशन तयार गर्ने लगायतका काम अहिले अनलाइनबाटै हुन्छ । गाडी बुक गर्न चाहने मानिसले आफ्नो नाम, इमेल र फोन नम्बर राखेर गाडी छनोट गर्न सक्ने छन् । यति गरेपछि उहाँहरूसँग थप कुरा गर्न कम्पनीले सेल्स कन्सल्ट्यान्ट खटाउने गरेका छन् । हामीले अहिलेसम्म ३ वटा गाडी पूर्णरूपमा अनलाइन माध्यमबाट विक्री गरेका छौं ।
डिजिटल भुक्तानीको दायरा बढाउने हो भने भोलिका दिनमा हामी नयाँ गाडी पूर्णतः घरमै बसेर खरिद गर्न सक्ने बनाउने छौं ।
स्कीममा केन्द्रित धेरै कम्पनीले ठूलो रकम छुट भनेका छन् । यसरी लाखौं रुपैयाँ छुटको घोषणा गर्दा ग्राहकमा जाने सन्देशको प्रवाह कम्पनीहरूले गरेको देखिएन । किन चुनौती बढेर धेरै छुटको स्कीम आएको हो ?
हरेक क्षेत्रलाई अहिले चुनौती छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा त चुनौती छ, गाडीको क्षेत्रमा नहुँने कुरै भएन । गाडी विक्रेता कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लागत भनेकै स्टकमा लाग्ने ब्याज हो । हरेक कम्पनीको कुल खर्चको ५० प्रतिशत व्याजको नै पर्न आउँछ । कोभिड पछि खर्च कटौती सबैले प्रयास गरे तर, फाइनान्सीयल बाहेकका क्षेत्रमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च घटाउन सकिएन । गाडी स्टकमा जति बस्छ त्यतिनै खर्च बढ्ने हुँदा कम्पनीहरूले ठूलो स्कीम ल्याएका हुन् । तीन महिनापछि हामीले २० लाखमा बेच्ने गाडी अहिले १९ लाख ५० हजारमा विक्री गर्दा अझ फाइदा हुने देखिन्छ । त्यसैले स्टकमा गाडी राख्न कम्पनीहरूलाई निकै कठिन छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा केही भन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यस्तोमा कम्पनीहरूका लागि आउन सक्ने चुनौतीहरु के के हुन् ?
अटोमोबाइल क्षेत्र विगत १० वर्षमा जसरी विस्तार भयो । यो क्षेत्रमा जसरी ग्ल्यामर देखियो । सायद त्यो ओभर हाइप पनि थियो कि । अहिले निकै ठूलो खर्च गरेर हाम्रा शोरुमहरू संचालन भइरहेका छन् । यो क्षेत्र हरेक वर्ष ६ महिनामा करेक्सन हुने गर्छ । विगतमा हामीले ३ देखि ४ महिनाको स्टक राखेर बस्थ्यौं । जुलाईमा हेर्दा हामीसँग धेरै स्टक थियो । त्यसैले हामीले गाडीको आयात घटाउँदै लगेका छौं ।
सबै कम्पनीले दुई महिना अघि नै अर्डर गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्डर गरेपछि गाडी ल्याउनै पर्ने हुन्छ । अहिले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ८० प्रतिशत गाडीको विक्रीमा सुधार आइसकेकोे अवस्था छ । तर, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन । यहाँ त झनै कोभिड संक्रमण फैलने क्रममा रहेको छ । अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादकलाई यही कुरा बुझाउन सक्नु पर्ने छ । साथै, हाम्रो खर्चलाई कसरी थेग्ने भन्ने चुनौती छ ।
विद्युतीय गाडीमा आयातकर्ताले ठूलो लगानी गर्न शुरू गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लगाएको करपछि यो व्यवसाय निकै संकटमा परेको छ । सरकारले विद्युतीय कारमा लगाएको अन्तःशुल्कमा केही छुटको घोषणा पनि गरेको छ । यसले अब विद्युतीय गाडीको भविष्य कस्तो हुन्छ ?
अहिले सरकारले दिएको अन्तःशुल्क छुटले बढेको मूल्यमा खासै फरक पार्दैन । हिजो हामीले ५६ लाखमा विक्री गर्दै आएको गाडी अब करिब ८० लाखमा किन्नु पर्ने हुन्छ । के ग्राहक त्यो मूल्य तिर्न तयार होलान् त र ? भन्ने विषय मुख्य हो । यसलाई क्रमिक रूपमा सरकारले कर बढाएको भए मूल्य जस्टिफाई गर्न सकिन्थ्यो होला । संसारभर अनुदानमा विद्युतीय गाडी चढ्न प्रेरित गरिरहेको समयमा नेपालमा एक्कासी लगाइएको ठूलो करले किन्ने सोच बनाएकालाई पनि पछाडि धकेलिदिएको छ ।